Ukukhuselwa ekushiseni ilanga kunye nemiphumo yalo - indlela yokuzikhusela
Emva kokuba ube yi-lobster
Ixesha leseholide lixesha lokuphumla kunye nethuba elihle lokwenza zonke iintlobo zemisebenzi yangaphandle. Abancinci nabakudala akufanele bakhohlwe ukuxubha kwi-sunscreen ngokwaneleyo. Kodwa kutheni ukukhuselwa ekushiseni ilanga kubaluleke kangaka, kutheni ufanele ukhusele isikhumba sakho ekungcoleni kwelanga kakhulu kwaye yintoni enye indlela engcono yokuyenza?
Ukungabikho kokukhuselwa kwelanga kunye nemiphumo yayo
Imisebe ye-UV equlethwe yelanga ilonakalisa ulusu xa libonakala lide kakhulu. Phakathi kwezinye izinto, oku kunokubangela ukushona kwelanga okubuhlungu, apho ulusu luba lukhuni kakhulu kwingcinezelo.
Ukukhuselwa kokushona kwelanga
Kwaye kunye nokuziphendulela komzimba kunokwenzeka.
Ukutshiswa kwelanga kusengozini kakhulu, kodwa ngokukodwa kuba kungabangela umonakalo wezempilo omdala, njengomdlavuza wesikhumba.
Ngeholide, ngokuqinisekileyo kulula ukufumana ukushisa kwelanga, kuba ngokuqhelekileyo kudla ngokugqithiseleyo endleleni.
Ukongezelela, umntu uhlala ekhohlwa ukuba kunokwenzeka ukutshiswa kwelanga nakwizulu ezinamafu okanye emthunzini omncinane. Amanyathelo okukhusela angapheliyo ke ayimfuneko xa ehamba emazweni atshisayo. Indlela elula yokuzikhusela elangeni kukugqoka iingubo ngokupheleleyo.
Ukukhuselwa elangeni kubalulekile
Ngenxa yokuba le nto ayisoloko iyimnandi kwiqondo lokushisa, kufuneka kube njengokukhanya kunye nomoya ongenakwenzeka. Oku akukukufungi xa uhamba kancane. Iinqhathi zelanga nazo ziyingxenye ye-wardrobe okanye enye i-parasol.
Gqoka kuphela i-swimsuit, i-swimsuit okanye i-bikini, kufuneka usebenzise isikrini selanga, esine-SPF ephezulu. Ingaba ugciniwe okanye ugqoke ngokukhawulezileyo, akufanele ubalekele izibuko zelanga, ukuze amehlo akhuselwe kwimisebe ephezulu. Ukuba uyayilandela le mithetho elula, ngoku ungaya eholide!
Ukuba ulusu lubomvu njenge-lobster ephekiweyo, uyazi ukuba usele ilanga kakhulu. Ngoko ke kufuneka uyenze ntoni xa kukubetha kanye kunye nesikhumba sitshisa kwaye siyakubetha? Ukucima ama-creams kunye nama-lotions aphucula kunye nokunceda ulusu luphuluke.
Ukutshatyalaliswa kwelanga kusenza kubekho uvuyo lweeholide
Ngokuqhelekileyo, kucetyiswa ukuba iimveliso eziqukethe i -loe vera okanye i-chamomile. Yiyiphi incedo efanelekileyo, ixhomekeke kwimeko yolusu, kungenxa yoko kunokuba luncedo ukufumana izixhobo ezininzi kwibala. Yintoni efanelekileyo ngokukhululeka kweentlungu, ziyi-envelopes epholileyo okanye emvula. Ukongeza, kufuneka uphuze kakhulu ukukhupha isikhumba esicinezelekileyo.
Ukulungiselela ukushisa kwelanga ngokuthe ngqangi kwaye kunzima, kuyacetyiswa ukuba ufumane iziyobisi ezichasayo kumgqirha. Izicwangciso zasekhaya ngokubanzi zicetyiswa kuphela. Kudla ngokucetyiswa ukutshiza iQuark kwiindawo ezichaphazelekayo ngexesha lokutshisa ilanga.
Nangona oku kucoceka kakhulu kunomdla, kodwa kunokukhokelela kwizifo okanye ukuphazamiseka ngenxa yeebhaktheriya ezikhoyo, ezenza imeko ibe yimbi.
Kutheni sifuntshisa ngombuzo womona ngomona